नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेल निर्माण, विश्वव्यापी बोलपत्र लागत दुई खर्ब::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेल निर्माण, विश्वव्यापी बोलपत्र लागत दुई खर्ब
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको लगानी बोर्डले सो मेट्रो रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । लगानी बोर्डले सो रेलमार्ग निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणको आवश्यक तयारी गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । आगामी चार साताभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इच्छुक कम्पनीहरूले प्रस्ताव बुझाउनुपर्ने गरी विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।
पहिलो चरणमा परामर्शदाता चयन गरी सो रेलमार्गको अध्ययन गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा सहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ मेट्रो रेलको अध्ययनका लागि प्रारम्भिक काम सुरु गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले छनोट गर्ने परामर्शदाताले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएस) तयार पार्नुपर्नेछ । सो कार्यका लागि नेपाल सरकारले नै स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ । यस्तै बोर्डले इच्छुक परामर्शदातालाई सो मेट्रो रेल निर्माणको समग्र पक्ष समेटिएको आशयपत्र पेस गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
विश्वका धेरै जसो देशमा सहज यातायाताका लागि मेट्रो रेल चलाइराखिएको सन्दर्भमा सो मार्गमा मेट्रो सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । आगामी चार वर्षभित्र मेट्रो रेल चलाउने तयारीका साथ आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्मको मेट्रो रेलको लम्बाई ४५ किलोमिटर लामो रहेको छ ।
बोर्डको २७ कात्तिक २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेट्रो निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीकाअनुसार सोही निर्णयका आधारमा बोर्डले विश्वव्यापी बोलपत्रमार्फत परामर्शदाता चयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
बोर्डले यही ३ जेठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत नागढुंगादेखि धुलीखेलसम्म मेट्रो रेल चलाउन सकिने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सो कार्यका लागि लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसमा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न चाहने संस्थाको आशयपत्र हेरेर उपयुक्त संस्था छनोट गरिने जानकारी दिए ।
‘हामीले ३० दिनको अवधि राखेर बोलपत्र आह्वान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विश्वभर नै मेट्रो रेल बनाएका अनुभवी संस्था वा निकाय यस प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।’
जानकारका अनुसार एक किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माणका लागि ४ अर्ब खर्च लाग्नेछ । त्यस हिसाबमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो निर्माणका लागि १८० अर्ब लाग्नेछ । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य प्राविधिक उपकरणमा भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च लाग्ने देखिएको छ ।
ओली अधिनायकवादको रिजल्ट : विप्लवमाथि प्रतिबन्ध, मेरो सरकार र प्रचण्डको जंगलयात्रा
नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ घुसाउन प्रधानमन्त्रीको हात, प्रचण्ड नै अचम्म !
संसदमा ‘मेरो सरकार’ : दुईतिहाइको दम्भमा विवेक गुमाउँदा राजतन्त्रको भद्दा नक्कल ?
नेतालाई जन्ती जान सेकेन्डमा हेलिकोप्टर, औषधी पुर्‍याउन २० दिन कुर्नुपर्ने ?
ओली जी ! भ्रष्टाचारको गन्ध अझै आएको छैन र ?